izilwanyana kunye nezityalo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: izilwanyana kunye nezityalo
Ulwimi lokuziphatha komzimba kunye nokuma kwezilwanyana zasendle
ezaposwa ngomhla 17.09.2021 17.09.2021
Izilwanyana zibonisa ngokucacileyo nangokucacileyo iinjongo zazo ngemikhwa, imbonakalo yobuso, ukuma, njl. Makhe sijonge ezona mpawu ziphambili "zemood" yesilwanyana
Yondla iprotheni yakho!
Njengabantu, oonomatse babanobunzima kwindyikityha yokufa - inani lokondla lehlile, oku kwabachaphazela abantu babo kwingingqi yedolophu! Nceda ii-pussies zethu ezithandekayo zisinde!
Ukunyamekela nokugcinwa kweenqatha zeAchatina
ezaposwa ngomhla 28.10.2018
Iminenke yaseAchatina yenye yeemolluscs ezinkulu emhlabeni. Ubude bale minenke bunokufikelela kwiisentimitha ezingama-30. Ukuba kweyakho ...
Ukugcina i-Achatina iminenke ekhaya
Amakati, izinja, kunye neempuku ezincinci zizilwanyana ezizithandayo. Baye bakhuliswa ezindlwini nasezindlini, ngaphandle kwefashoni. Kodwa fashion ivela Achatina kunye nezinye izilwanyana ...
I-Achatina inkumba - isilwanyana esingaqhelekanga esivela eAfrika - ukhathalelo, ukuzala, ulondolozo
ezaposwa ngomhla 28.10.2018 28.10.2018
Ukuba kufuneka uchithe ixesha elininzi emsebenzini, kodwa kwangaxeshanye ufuna ukuba nesilwanyana sasekhaya ubuncinci. Ukuba ukugcina inja "kukunethezeka okungavumelekanga", kwaye zonke iintlobo zeempuku zibonakala ngathi "yi-banal". Xa ufuna ...
Kuphi i-eucalyptus ekhula eRashiya?
Ikhula phi i-eucalyptus eRashiya? Ngaba ukhula ngokwenene apha? Zininzi e-Australia. Zikhula apho. Kwaye apha, ukuba ikho, ke kwigadi yezityalo, kuya kufuneka ...
Ngaba kunokwenzeka ukugcina indlu yeekati neentaka ngexesha elinye?
Ngaba iikati neentaka zingagcinwa ekhaya ngaxeshanye? Iminyaka emininzi sasinayo i-canary kwikheyiji kunye nekati. Khange amkhathaze nokuba ngubani, kodwa uhlala ehlala phantsi ...
Luhlobo luni lwezinambuzane ngaphandle kwamaproza ​​angakwazi ukugijima ngokukhawuleza phantsi kwendlu?
Yeyiphi inambuzane ngaphandle kwamaphela onokuyenza FAST ibaleke phantsi eflethini? Kukho amaphela amnyama. Ziyafana nooqongqothwane abaqhelekileyo, abamnyama nabakhazimlayo kancinane. Ngokungafaniyo neentloko ezibomvu eziqhelekileyo kunye ...
Ngubani uFenech? Esi sisilwanyana esikhulileyo esihlala entlango. Isilwanyana esimangalisayo esinokuphila kubushushu, kwaye nokuzingela. Iindlebe ezinkulu ziluhlobo lwendawo ezifumana intshukumo encinci yesidlo sasemini esizayo ...
Kutheni i-mushroom emhlophe imbiza ngokumhlophe?
Kutheni le nto amakhowe amhlophe abizwa ngegama elimhlophe ngokuchanekileyo? I-mushroom ye-boletus ibizwa ngokuba mhlophe ngombala wokukhanya nokuba sele yomile. Umgangatho ongezantsi wekepusi yamakhowa ukhanya ngombala, kwaye ongaphezulu umdaka. Amakhowa amhlophe ngukumkani ...
Kutheni i-earthworm ibhaqa?
Kutheni le nto umsundululu ufuna ibristles? Umbungu womhlaba ufuna iinwele ngenjongo efanayo thina bantu sidinga ulusu, kukukhusela umzimba kwimpembelelo yendalo esingqongileyo, ukubola kweentshulube kwanele ...
Indlela yokubiza ikati yasePersian?
Ungayibiza njani ikati yasePersi? Xa ukhetha igama, kufuneka ukhethe imibutho enokukuqhagamshela njengomnini kunye nesilwanyana sakho sasekhaya, okanye uqhubeke nokuziphatha okuyimfuneko ngokunikezela igama elithile, ...
Ziziphi iindawo ezifunekayo kwiiseli zazo zonke izinto eziphilayo?
Ngawaphi amalungu afunekayo kwiiseli zazo zonke izinto eziphilayo? Ukuya kude ndikhumbule kwikhosi yekharityhulam yesikolo, iseli inenucleus. I-nucleus yona, iqulethe iDNA. Igobolondo ebizwa ngokuba yimbumba. ICytoplasm - ...
Kutheni iinkomo zifuna iimpondo?
Kutheni inkomo ifuna iimpondo? Ndicinga ukuba iimpondo zazinikwa inkomo ngokwendalo, okokuqala ukuzikhusela kunye nabathandekayo bazo phambi kwengozi notshaba, okwesibini, ukuvela kweenkomo kunganika iimpondo ...
Kutheni ikati ibamba imouse kwisitalato ize uyizise ekhaya?
Kutheni ikati, ibambe imouse esitratweni, iyizisa ekhaya? Ithuku, ulithwala alise kwinkosi yakhe. Oko kukuthi, umntu omondlayo. Kulungile ukubonisa inqanaba lokuzinikela. Lo nto…
Kutheni i-pear ibonisa uphawu lokuphila ixesha elide?
Kutheni le nto iperari iluphawu lobomi obude? Mhlawumbi le isiko lamaTshayina (amapere yimithi ehlala ixesha elide, ikhula ukuya kwiminyaka eyi-100 ubudala), kwamanye amazwe inentsingiselo eyahlukileyo. Kwi-Greece yamandulo, ipere ...
Ngaba i-fox ingahlasela indoda kunye nenja kwaye kutheni?
Ngaba impungutye inokuhlasela abantu kunye nezinja kwaye ngoba? I-fox yayingenangqondo, ngokusobala abayifumananga intsholongwane. Ayikho enye inguqulelo, umoya ongcolileyo awukwazi kungena kwimpungutye ...
Kutheni inja ingenakuncasa?
Kutheni inja ingenakutya iilekese? Njengabantu, iilekese ziya kuchaphazela kakubi izinja zenja yakho. Iswekile isusa ikhalsiyam emazinyweni, ziba brittle, kwaye kwangoko i-bacteria ebolileyo iqala umsebenzi wayo, iphuhlise ...
Yintoni eyenziwe kwizityalo endaweni yentyatyambo?
Kwenziwa ntoni kwizityalo endaweni yentyatyambo? Ngokwendalo - isibeleko esingekazalwa esiswini, ukuba isichumiso senzekile. Ndicinga ukuba le yimbewu, (ukuba ezi ntyatyambo, umzekelo) iibhokisi ezinembewu, ezinokuthi ke zivuthwe ...
Indlela yokufundisa ikati ukuhla emva kwendlu yangasese?
Uyiqeqesha njani ikati ukuba imlandele kwindlu yangasese? Ndingathanda ikati yam ukuba iye kwindlu yangasese ize ihlambe emva kwayo, emva koko andizukucoca ibhokisi yenkunkuma,
Page 1 Page 2 ... Page 249 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-52 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,099.